गोबरग्यासले लियो ५ मिनेटमै एकै परिवारका ४ जनाको ज्यान, पाचौंलाई भने बचाउन सफल « Sajhapage24
March 27, 2019 Wed
गोबरग्यासले लियो ५ मिनेटमै एकै परिवारका ४ जनाको ज्यान, पाचौंलाई भने बचाउन सफल
२६ वर्षका देवेन्द्र १५ दिन पहिले मात्रै पिता बनेका थिए । सन्तान प्राप्तिको खुसीमा घरमा पूजा भएको थियो । पूरै परिवार खुसी थिए । तर, केही मिनेटमै यस्तो घटना भयो जसको कसैलाई आभाससम्म थिएन । गोबरग्यासको खाल्डोले ५ मिनेटमै एकै परिवारका ४ जनाको ज्यान लियो ।
हरियाणाको कुरुक्षेत्रका बलदेव सिंहको घरपछाडि गोबरग्यासको प्लान्ट थियो जसलाई मर्मत गरिएको थियो । पहिले साधारण प्लान्ट भएकोमा पछि मटका प्लान्ट बनाइएको थियो जसको खाल्डोमा मान्छे पनि तल जान मिल्छ । विगत २ दिनदेखि ग्यास चुलोसम्म राम्रोसँग पुगेको थिएन । परिवारलाई ग्यास लिक भएको आशंका थियो । घरमा पूजा सकिएपछि दिउँसो ११ बजेतिर घरका पुरुषहरु कुरा गर्दै घरपछाडि पुगे ।
त्यसपछि देवेन्द्रले गोबरग्यास कहाँबाट लिक भएको छ भनी खोज्ने प्रयास गरे । उनले भर्याङ लगाएर खाल्डोमा तल गए । तल जानासाथ उनी बेहोस भए । लगत्तै उनलाई बचाउन भाइ रुपिन्द्र तल गए । उनी पनि तल पुग्नासाथ बेहोस भए । दुवै छोरा बेहोस देखेपछि पिता बलदेव बचाउन तल गए तर उनी पनि बेहोस भए । तीनजना बेहोस भएपछि छिमेकमा बस्ने बलदेवका दाजुका छोरा जोगिन्द्र त्यहाँ पुगे । उनी पनि तीनजनालाई बचाउन तल गए उनी पनि बेहोस भए । यो सबै ५ मिनेटभित्रै भएको बताइएको छ ।
सूचना पाएपछि गोबरग्यासका मिस्त्री परमजीत पनि साथहिरुसँग घटनास्थल गए । डोरी बाँधेर परमजीतलाई तल पठाइयो । उनी २ सिढी पनि तल नपुग्दै अचानक उनको सास रोकियो । उनी बेहास हुन लागेपछि माथि भएकाले उनलाई ताने । उनको भने ज्यान बच्यो ।
विशेष शुत्रका अनुसार खाल्डोमा कार्बन मोनोअक्साइड र मिथेन ग्यास भरिएको हुन सक्छ । कार्बन मोनोअक्साइड अत्यन्त घातक ग्यास हो । यद्यपि मृत्यु कार्बन मोनोअक्साइडकै कारण भएको हो वा अन्य कारणले भन्ने पोष्टमार्टमपछि मात्र थाहा हुने बताइएको छ ।
तपाईलाई छोरा कि छोरी जन्माउने चाहाना छ ? तपाईको ईच्छा अनुसार जे भन्यो त्यहि जन्माउने चाइनिज क्यालेन्डर हेर्नुहोस ! यस्तो छ २०१८ को क्यालेन्डर
कस्ती निर्दयी आमा हुन् यी जसले ७ र १२ बर्षका छोरीहरु छोडेपछि यस्तो रुवाबासी , श्रीमानले आँशु झार्दै यस्तो आग्रह गरे(सेयर गर्नुहोला)
आँपको कोया फाल्ने गर्नुभएको छ ? यसको फाइदा थाहा पाएपछि तपाईं चकित पर्नुहुनेछ !
१ लाख भन्दा बढी तलव भएको युरोपेली देश माल्टामा नेपाली कामदारको माग
“सुगर” रोग निको पर्ने एकमात्र अचुक ओखती हो ‘बेल’, यसरी प्रयोग गर्नुहोस्
घ्यु लगाएर सम्भोग गर्दा चाहिने भन्दा बढि सन्तुष्टि हुन्छ (पुरा पढ्नुहोस्)
यसरी हुन्छ युरिक एसिड, यी हुन कारण र बच्ने ८ उपाय - जानीराख्नुहोस
धेरै रिसाहा मानिसको लागी डरलाग्दो तथ्य सार्बजनिक
छोरीको आखा फुट्ने गरी कुट्ने ज्वाईलाई बाटैमा यसरी खुट्टा भाचिने गरी कुटे माइती पक्षले (भिडियो हेर्नुहोस)
आफ्नो सन्तान भाग्यमानी बनोस भन्ने चानुहुन्छ ? भने अपनाउनुहोस् यी उपाय !
आफ्नो छाता र कोट बोक्न नसक्ने नेताले कसरी देश बनाउछ ?